Six Sigma Vs. ITIL | Waa kuwee lix sigaar ama ITIL? - ITS Tech School
Waa maxay ITIL iyo Six Sigma?
Mucaaradka dhexdiisa ITIL iyo Six Sigma
Warshad kasta oo ay ka mid yihiin teknoolajiyadda macluumaadka waxay u baahan tahay in adeegyadooda ay soo gudbiyaan ay yihiin kuwo aad u sarreeya. Si loo hubiyo maamulka maamulka tayada, laba istiraatiijiyad ayaa loo adeegsanayaa si ballaaran - Kombiyuutarka IT Infrastructure (ITIL) iyo Six Sigma. Labaduba waxay leeyihiin dano gaar ah oo xiiso leh. Xaalad waliba, ururada intooda badani waxay u jilaan inay u isticmaalaan labadooda.
Waxay noqon lahayd feker caqli ah oo loogu talagalay xirfadlayaasha IT si ay u helaan shahaadada ITIL kaasoo siin doona faham ku saabsan sida loo isticmaalo ITIL si loo xoojiyo faa'idooyinka Six Sigma. Inkasta oo ay xaqiiq tahay in ay ka soo horjeedaan, waxa kaliya ee aasaasiga ah ee ku saabsan iyaga ayaa xooga saaraya daacadnimada macaamiisha. Waxaad na siisaa fursad aad ku aragto halkan si faahfaahsan halkan.
ITIL waa qaab loo isticmaalo xoojinta iyo gudbinta adeegyada IT-ku salaysan. Bandhigga ITIL wuxuu leeyahay qeybo badan. Maamulaha maamulka ayaa ku jira maaraynta isbeddelka, maaraynta maaraynta, maamulka maareynta, maamulka xakamaynta iyo dejinta maamulka. Caymiska maamulka waxaa ka mid ah maaraynta xaddidan, maaraynta helitaanka, maaraynta lacagaha, maareynta heerka macaashka iyo maamulka maareynta horumarinta maamulka. Mid kasta oo ka mid ah qaybahaani waxay leeyihiin farsamooyin iyo habab loo qoondeeyey oo loo wada dhan yahay ama si gaar ah loo wada qaadi karo.
Six Sigma waa mid si aan caadi ahayn loo adeegsaday maaraynta IT-da ee isbeddelka nidaamyada hawlgalka. Habkaan tooska ahi wuxuu qiimeeyaa qaababka muhiimka u ah ganacsigaaga, waxay isticmaalaan habka loo horumariyo hababka iyo natiijooyinkooda iyo cabirida dabeecada wax soo saar ee habraaca. Waxay si fiican isku dhafan tahay fikradda maareynta faa'idada IT-ga waxayna bixisaa muhiimad maaliyadeed maaliyadeed. Mudnaanta iyo kalsoonida macaamilka ayaa ah qaybo ka mid ah lix Sigma.
Xaalad caadi ah, ITIL iyo Six Sigma looma isticmaali karo dareenka dhabta ah. Noqoshada, sida loo isticmaali karo, waxaa loo isticmaalaa inay qayb ka mid ah isku dhafaan sida habdhaqanka ku habboon ee dhaqanka si kor loogu qaado ganacsiyada si aad u ballaaran.
Six Sigma waa qaybta ugu badan ee xisaabinta, foomamka iyo baaritaanka foomamka ganacsiga si loo xoojiyo. Waxay ku tiirsan tahay habka ugu wanaagsan ee lagu horumarin karo foomamka, ITIL waxay wax badan ka geddisan tahay sharuudaha iyo sharciyada loo baahan yahay si loo ogaado "waxa" habraacyada.
Farsamooyinka ITIL waxay awood u siinayaan ganacsiyada in ay ogaadaan waxa loo baahan yahay in la sameeyo si loo horumariyo foomamka. Inkasta oo laga yaabo in la filayo, Six Sigma wuxuu u saamaxaa ganacsiyada in ay go'aan ka gaaraan sababta sababta ama habka ay u socdaan si xun. Waqtigaasi wuxuu ogaanayaa sida tan loo xallin karo. Waxay ka dhigaysaa hab lagu qiyaaso adeegyada aan la garanayn. Maaddaama Six Sigma ay isticmaalaan baaritaan la qiyaasi karo, waxaa habboon in isku dayda in ay u diyaar garoobaan dib-u-hagaajinta goobaha tijaabada si loo hubiyo in faa'iidooyinka ay yihiin kuwo la qabsoomi karo.
Ku biirida hababka
Xaqiiqdii, xitaa tan kala duwanaanshahan, labadaan habab markii ay ku soo biireen waxay bixiyaan waxyaabo badan oo xiiso leh. ITIL waxay go'aan ka gaartaa waxa loo baahan yahay in lagu sameeyo urur kasta, ma aha sida. Sidaa daraadeed, xirfadlayaasha IT-da ee ururku waxay u baahan yihiin inay go'aamiyaan socodka nidaamka iyo inay samaystaan ​​tilmaamo qeexaya shaqada. Sidoo kale, Sig Sigma wuxuu kugula talinayaa sidii loo ogaan lahaa darawalka ugu muhiimsan ee arrimaha iyo sida loo xallin karo. Iyadoo la adeegsanayo "waxa" iyo "sidee" isbeddelka qiimaha loo qiimeeyo, labada dariiqo ayaa si wadajir ah u wanaajiya nooca taageerada faa iido iyo gaadiidka.
Six Sigma waxaa loo isticmaali karaa qayb ka mid ah isbeddelka nidaamyada hadda ee ururka kuwaas oo hadda sida loo isticmaalo qaab-dhismeedka ITIL ama si fudud u guurin. Marka laga hadlo marxaladda socdaalka, ururka ayaa isticmaali kara habka loo jebin karo khatarta, taas oo lagu ogaanayo waxa loo baahan yahay si loo sameeyo nidaamka ITIL-ka wanaagsan iyo ka dib isticmaalka kiis ganacsi si uu u muujiyo sida ay u noqon doonto ITIL-gobolka oo dhan.
Maaddaama labadaba hababka ITIL iyo Six Sigma ay muhiim u yihiin guusha ganacsiga, iyada oo la socota ITIL oo ay weheliyaan Six Sigma oo muujinaya caawinaad dheeraad ah. Khubarada ayaa ku kalsoon in tani ay bixiso barashada sidii loo hirgelin lahaa Six Sigma si loo siiyo nidaam wanaagsan oo ITIL taas oo ku salaysan xaalad ujeeddooyin ganacsi ee ururka.
Arag sidoo kale: Fursadaha Shaqo ee Shahaadada ITIL